Shop for Android - APK Download
Home » Apps » Shopping » Shop
4.1.12 for Android
The description of Shop
Shop : မြန်မာပြည် နံပါတ် ၁ အကြီးမားဆုံး အွန်လိုင်း Shopping App
Shop App ဟာမြန်မာပြည် နံပါတ် ၁ အကြီးမားဆုံး Online Shopping app ဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းပေါင်း သိန်းကျော်နှင့် Brand ရာကျော်ကို ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး Shop က အိမ်တိုင်ရာရောက်တာဝန်ယူပြီးလာပို့ပေးပါတယ်။ အိမ်ရောက်မှ ငွေပေးချေရတဲ့အတွက် စိတ်ချရပါတယ်
ပစ္စည်းမျိုးစုံဖြစ်တဲ့ အားသွင်းကြိုး၊ ကော်ဇော၊ ကား အဆင်တန်ဆာများ၊ မျက်မှန်များမှ နေ၍ ဖုန်းနှင့်ရေခဲသေတ္တာ၊ ကွန်ပျူတာနှင့်တွဲသုံးသော မောက်စ်၊ လက်သည်းနီ၊ ပလက်ပေါက်, မော်တာ, ကားရေပန့်၊ ဖိနပ်များ၊ ဖိနပ်အမျိုးအစားများအားလုံး၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အမည်းအစရှိသည့် ပစ္စည်းများကို Shop မှဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ရွေးချယ်စရာ ပစ္စည်းများအလွန်များပြားခြင်းနှင့် ထောင်ပေါင်း များစွာသော ဈေးရောင်းသူများရှိသည့်အခါ သင်သည် ကားကျပ်မှာ၊ ပစ္စည်များကို နှို်င်းယှဉ်ဖို့အတွက် တစ်ဆိုင်ဝင် တစ်ဆိုင်ထွက် လျှောက်သွားစရာလည်း မလိုအပ်တော့ပါဘူး။
Search Box မှာ အလိုရှိရာကို ရှာဖွေလိုက်ရုံနှင့် ရွေးချယ်စရာ ပစ္စည်းများစွာ တွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင် 😍 😍
Shop မှာ ဈေးဝယ်ရခြင်းသည် အလွန်လွယ်ကူသက်သာပါတယ်။
Shop App မှသင့်ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းကို ငွေဖြည့်ဖို့ prepaid ကဒ်များကို Shop app ကနေဆင့် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အွန်လိုင်းပေါ်က ပစ္စည်းအတုအပတွေကိုလည်းကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ Shop Official Stores အားလုံးပစ္စည်းတွေက တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းမှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုထားပါတယ်။ ရောင်းချသူရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ထုတ်ကုန်မှာ တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းစစ်မှန်တယ်ဆိုတာ Official Store က တာဝန်ရှိသူက အာမခံပေးထားပါတယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စတိုးကို Follow လုပ်ပြီး ဘောက်ချာ၊ update များနဲ့ Special Offer များကို ဆက်စောင့်ကြည့်နေပါ။
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၁၄ခုအနှံ့လိုက်ပို့ပေးတယ် အိမ်ရောက်မှငွေပေးချေ
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၁၄ ခု အနှံ့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး အွန်လိုင်းဈေးဝယ်စနစ်ဖြစ်သော်လည်း ဈေးဝယ်သူများကို ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အပြည့်အဝပေးနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါသည်။ အိမ်ရောက်မှ ငွေပေးချေရတဲ့အတွက် စိတ်ချရပါတယ် ပစ္စည်းမှားနေပါသလား??? ပြဿနာမရှိပါဘူး ပစ္စည်းကိုပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ပြီး ငွေလည်းပြန်အမ်းပေးပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ website (shop.com.mm) နှင့် Shop App ဝယ်ယူလျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဈေးဝယ်မှုအတွေ့အကြုံကိုရရှိစေမှာပါ၊
Shop app မှာ daily flash sale (နာရီပိုင်းလျှောဈေး)တွေကို လျှော့ဈေးများများနဲ့ ရောင်းပေးမှာနော် ! Flash Sale ပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက်ထိမြန်မြန်ရောင်းအားကောင်းတယ်ဆိုတာ ဘားအပေါ်မှာရှိတဲ့ timer နဲ့အတူပြသထားမှာဖြစ်ပြီး ဘားတန်းရဲ့ အောက်ခြေမှာတော့ ပစ္စည်းအရေအတွက်ဘယ်လောက်ကျန်သေးတယ်ဆိုတာ ပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင် app ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ ခက်ခဲနေလို့ Flash Sale ကို လက်လွတ်သွားရင်တောင်မှ Flash Sale အသစ်တွေ နေ့တိုင်းတင်ပေးနေမှာပါ အချိန်နဲ့ အရေအတွက်တော့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
Shop is the no.1 online shopping destination in Myanmar where you can find and buy over 100,000 products across hundreds of brands which we deliver to your doorsteps in all 14 states and regions of Myanmar.
In Shop application, there are variety of product and brands showcasing from mobile phone, power socket, accessories, sunglasses to phone, refrigerator, computer, skin care, shoes, car pump and etc. For payment option, we accept the payment on delivery and Visa/MasterCard. Easy payment options that offer fast and secure online shopping. We also provide country-wide delivery service as well.
With Shop, there is no need to go around the town facing traffics in Myanmar. You can just search whatever you want from withafew press of buttons conveniently over 100,000 products offering from thousands of sellers at the best online prices.
We protect our customer 100% and you can do online shopping in Myanmar safely with Shop. If you receivedafaulty item just return it for refund.
Shop is now part of Alibaba group. Happy shopping in Myanmar.
Shop 4.1.12 Update
Thank you for using Shop Online Shopping App! We have enhanced the performance of our app and launched new features to provide you withamore holistic and complete shopping experience.
Our “Mobile Week” campaign from 24th June to 30th June will present great discounts and deals from your favourite brands acrossavariety of categories!
Publish Date: 2019-06-01
V4.1.12 37.4 MB APK
Shop 4.1.12 (64)
File SHA1: 850db88091724dceea02fb7b82132205dfbf7a57
V4.1.11 37.3 MB APK
Shop 4.1.11 (63)
File SHA1: 9772b9ea557ab107d213c22698278962ff58b146
V4.1.10 36.2 MB APK
Shop 4.1.10 (62)
File SHA1: d341559c37c9fec9eeb65dcb2b5c2c110914c23b
V4.1.9 35.2 MB APK
Shop 4.1.9 (61)
File SHA1: 5e81b8cfbf1ada2f5641c09c1f52bb8b2e2ab2cf
Similar to Shop
More From Daraz Mobile
Daraz eStore Management System